Muxuu Macallin Jurgen Klopp ka yiri Wararka Kooxda Liverpool la xiriirinaya Kylian Mbappe? – Gool FM
Muxuu Macallin Jurgen Klopp ka yiri Wararka Kooxda Liverpool la xiriirinaya Kylian Mbappe?
(Yurub) 09 Nof 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa markii ugu horreysay ka hadlay wararka kooxdiisa Reds la xiriirinaya saxiixa Kylian Mbappe.
Jurgen Klopp ayaa meesha ka saaray suurto-galnimada ay kooxda Liverpool ku dhammaystiri karto xagaaga soo socda saxiixa Weeraryahanka naadiga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe.
Warar dhowr ah ayaa sheegayay in Liverpool oo aan wax saxiix ah sameyn xagaagii la soo dhaafay inay Mbappe ka dhigatay bartilmaameedkooda koowaad ka hor suuqa kala iibsiga ee soo aaddan.
Wiilka reer France ayaa la warinayaa inuu ka fiisan doono inuu ka tago garoonka Parc des Princes sanadka soo socda haddii kooxdu ay markale ku guuldarreysato inay ku guuleysato tartanka Champions League.
Isagoo hadlayey ka hor kulanka Liverpool ay la leedahay Manchester City macallin Klopp ayaa u sheegay Mirror: “OK, laga soo bilaabo dhinaca aragtida isboortiga, ma jiraan sababo badan oo aan ula saxiixanno Mbappe, alla muxuu yahay ciyaaryahan.
“Laakiin waxay ku saabsan tahay lacagta dabcan, ma jirto fursad, xaqiiqdii fursad malahan, waan ka xumahay dilitaanka sheekadaas, uma maleynayo inay jirto koox Adduunka ka dhisan oo PSG ka iibsan karta Kylian Mbappe, annaguna kuwaas ayaannu ku jirnaa, ma qaban karno, way u fududahay taas.
“Ma jiraan wax dheeri ah oo aan ka dhihi karno wax ku saabsan arrintaas oo aan ahayn inaan daacad ahaanno, laakiin iibsashada ciyaaryahan heerkiisa oo kale ah way adag tahay.” ayuu hadalkiisa ku daray Klopp.
Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay si wayn u xiiseynaysay saxiixa Mbappe, iyadoo tababare Zinedine Zidane uu dhawaan sheegay in u dhaqaaqista Bernabeu ee 20 sano jirkaan ay u noqon doonto riyo.
Xiisaha Liverpool ay u qabto Mbappe ayaa salka ku haysa xaqiiqda ah in Los Blancos la sheegayo inay miisaameyso dalabkii ay ka gudbiyeen Mohamed Salah.